Budanov Aleksandr - रूसी फुटबल खेलाडी, हाल निःशुल्क एजेन्ट को स्थिति मा स्थित। उहाँले 25 वर्ष पुरानो छ, त्यसैले आफ्नो क्यारियर पूर्ण फक्रिएको छ, तर सफलताको उहाँले अझै हासिल भएको छैन। Budanov अलेक्जेन्डर एक केन्द्रीय स्ट्राइकर रूपमा कार्य तर आवश्यक भएमा पनि एक winger को स्थिति लाग्न सक्छ।
Budanov अलेक्जेन्डर उहाँले समारा को एकेडेमी मिल्यो सम्म उहाँले फुटबल खेल्दै शुरू जहाँ Sergiev Posad, मा जन्म भएको थियो अप्रिल 27, 1991 "को रूसीहरूले को पंख।" 2009 मा, त्यो एक पेशेवर सम्झौता क्लब संग हस्ताक्षर, तर आधार मा प्राप्त गर्न सकेनौं। एक समय को लागि त्यो आरक्षित टोली लागि केवल हुन्थे, र 2010 मा पहिलो मुख्य टोलीलाई बोलाएर थियो। तर त्यहाँ उहाँले बाँकी मात्र नियमित खेलाडी दोस्रो टोली मात्र दुई खेल खर्च - 2012, क्लब संग आफ्नो सम्झौता अन्त आउँदा सम्म। त्यसपछि Budanov, अलेक्जेन्डर थाले गर्न नजर लागि नयाँ काम, र फेब्रुअरी 2012 हस्ताक्षर एउटा सम्झौता संग "वोल्गा" बाट Nizhny Novgorod।
को "वोल्गा" गर्न संक्रमण
तर, नयाँ ठाउँमा Aleksandr Budanov सफल भएन - उहाँले फेरि, विशेष क्लब को आरक्षित टोली लागि प्रदर्शन, र मुख्य टोलीमा, उसले आफूलाई प्रमाणित गर्न कुनै पनि मौका दिनुभएन। फलस्वरूप, उहाँले सात महिना क्लब मा, क्षेत्र मा जो समय कहिल्यै एक पटक बेला कोर टीम को भाग रूपमा बिताए। मामिलामा यो राज्य उहाँलाई अनुरूप थिएन, र क्लब आवश्यक थिएन। फलस्वरूप, सेप्टेम्बर 2012 मा, "वोल्गा" आफ्नो अल्पकालीन सम्झौता समाप्त भएको छ। जो निम्न Aleksandra Budanova आफैले लिन सहमत? स्थानीय समाचार पत्र को अन्तिम पृष्ठमा लिखित कि बाहेक उहाँको बारेमा - फोटो पत्रिका को कवर सजी छैन फुटबल खेलाडी। त्यसैले, काम फुटबल खेलाडी को नयाँ स्थान उहाँले एक वर्षको लागि एक सम्झौता हस्ताक्षर कोसँग एक सानो क्लब "सिजरान-2003", भयो।
"सिजरान" को प्रदर्शन
अलेक्जेन्डर Budanov - जो 2012 मा उमेर 21 वर्ष मा प्रमुख लीग मा व्यावसायिक स्तरमा मात्र दुई मिलान थियो एक खेलाडी। नयाँ क्लब उहाँले थियो मौका साबित नै एक सानो राम्रो - भित्र stipulated मा ठेक्का, को स्ट्राइकर बायाँ क्षेत्रमा नौ पटक, विशिष्ट द्वारा एक लक्ष्य। त्यसैले उहाँलाई संग सम्झौता विस्तार थिएन स्वाभाविक, यो फुटबल क्लब छैन, आवश्यक छ, र शरद ऋतु 2013 मा Budanov काम बाहिर फेरि थियो। "LADA" Togliatti देखि - खुसीको कुरा, चाँडै, उहाँले अर्को सानो क्लब संग एउटा सम्झौता हस्ताक्षर गरे। दुर्भाग्यवश, यो सम्झौता भएको थियो गणना लागि मात्र आधा एक वर्ष, तर पनि थियो पर्याप्त गर्न प्लेयर, किनभने कम्तिमा उहाँले इच्छा प्राप्त एक मौका।
को "LADA" प्ले
नयाँ फुटबल क्लब, दुर्भाग्यवश, फेरि खेलाडी लागि आधारमा छलफल गरिएको छैन। छ महिना लागि, उहाँले आठ पटक क्षेत्र मा देखा, र लगभग सधैं यो पर्याप्त खेल समय प्राप्त छैन, एक विकल्प छैन। त्यसैले सम्झौता उहाँलाई मा जाडो 2014 थिएन विस्तारित र अलेक्जेन्डर फेरि सारियो नयाँ स्थान - यो समय मा क्लब "Strogino"।
नयाँ सुरुवात "Strogino"
यसलाई मा छ "Strogino" Budanov आफूलाई पाउन सक्षम थियो - उसले धेरै खेल समय प्राप्त गर्न थाले। लागि अठार महिना उहाँले व्यतित मा क्लब, अलेक्जेन्डर बायाँ क्षेत्रमा 39 पटक, विशिष्ट द्वारा तीन गोल। यो आफ्नो क्यारियर को सबै भन्दा सफल अवधि थियो, र त्यो सार्न सक्षम हुन आशा गरे। को "वस्त्र कामदार" मा - 2015 को गर्मी मा उहाँले बताउनुभयो गर्ने क्लब, संग सम्झौता नविकरण गर्न इन्कार गरे र वृद्धि गयो किन छ।
दुर्भाग्यवश, निर्णय Budanov थियो पनि लापरवाह। को "कपडा कामदारहरूको" मा वर्षको लागि अलेक्जेन्डर 19 मिलान प्ले र तीन गोल, तर आफ्नो सेवा करार को अन्त्यमा क्लब आवश्यक थियो। तसर्थ, 2016 को गर्मी मा Budanov फेरि एक क्लब बिना बाँकी थियो। अब मात्र उहाँले पहिले नै 25 वर्ष पुरानो थियो र त्यो अझै पनि परिप्रेक्ष्य राख्नु सक्ने एक युवा खेलाडी, थिएन। त्यसैले, कुनै एक उसलाई एउटा सम्झौता हस्ताक्षर रुचि छ। फलस्वरूप, 2016 को गर्मी देखि Budanov निःशुल्क एजेन्ट को स्थिति, एक क्लब को एक सदस्य र एक काम खोज्दै छ। सायद त्यो जाडो स्थानान्तरण विन्डो मा यो के गर्न सक्छ, तर हालसम्म फुटबल को स्थिति धूमिल देखिन्छ।
समयमा, अलेक्जेन्डर Budanov एक होनहार फुटबल खेलाडी मानिन्छ - उहाँले 17 को उमेर मा रूस को युवा टोली लागि छ पटक प्ले र पनि एक गोल गरेका थिए गोल गरेका थिए। 21 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय टोलीमा - त्यसपछि उहाँले दुई पटक अप गर्न 19 वर्ष र चार पटक राष्ट्रिय टोलीलाई बोलाए। तर वयस्क राष्ट्रिय दस्ते हिट भएन।
Nikita Bazhenov: फुटबल जीवनी
अर्थ रगतको विश्लेषण मा MPV? MPV: ट्रान्सक्रिप्ट विश्लेषण
मेग ( "अलौकिक") - को श्रृंखला मा brightest वर्ण को एक
ए। वी। शचेसेव, वास्तुकार: जीवनी, परियोजनाहरु, कार्यहरू, फोटो कार्यहरू, परिवार
वर्ग Pythagorean गणना पाइथागोरस वर्ग, प्रकृति र अनुकूलता जन्म मिति। पाइथागोरस को वर्ग कसरी गणना गर्ने?
Gustav Husak - व्यावहारिक राजनीतिज्ञ वा repressive नेता?
लस भेगास4* (स्पेन) फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
घरमा shawarma के हुन सक्छ